Predictive Solutions Aqoonsiga Shirkadu - Joornaalka Naqshadeynta
Aqoonsiga Shirkadu Xallinta Saadaasha ayaa ah adeeg bixiyaha alaabada softiweerka ah ee saadaalinta saadaasha. Wax soo saarka shirkadda waxaa loo isticmaalaa si loo saadaaliyo iyadoo la falanqeynayo xogta hadda jirta. Calaamadda shirkaddu - waa qaybo goobaabin ah - waxay u egtahay sawirada jaantusyada sawir-gacmeedyada iyo sidoo kale sawir aad u qaabeysan oo la fududeeyay oo isha ku jira. Madal astaanta "iftiinka daadinta" waa darawal u ah dhammaan sawirada alaabada. Labada qaab beddelka, qaababka dareeraha ah ee muuqaalka leh iyo sawirada fududeeynta kuleylka ah waxaa loo isticmaalaa sidii sawiro dheeri ah oo loogu talagalay dhammaan codsiyada kala duwan.
Magaca mashruuca : Predictive Solutions, Magaca naqshadeeyayaasha : Mikhail Puzakov, Magaca macmiilka : Predictive Solutions.
Aqoonsiga Shirkadu Mikhail Puzakov Predictive Solutions